Ukukhokelwa kweZibane eziKhanyayo ezingama-150w i-Bulbs engu-120V 5000K China Manufacturer
Inkcazo:Ndikhokele ukukhanya kwe-150w,Ukukhokelwa ziiBhuleki,Ndikhokele Izibane ezingama-120v zoMkhukula
Home > Imveliso > Ukukhanya koMkhukula we-LED > 200w Ukukhanya koMkhukula > Ukukhokelwa kweZibane eziKhanyayo ezingama-150w i-Bulbs engu-120V 5000K
Umzekelo No.: BB-FL-150W-E1
UkuKhanya kwethu okuKhanyisiweyo we-150w kunokuvelisa ukukhanya okufikelela kwi-18000lm. Oku kwaKhokelela kwiibhulethini ukutshintshwa okugqibeleleyo kwe-300W ye-halogen bulb ilingane. Le Led i-120v yezibane ezitshileyo ngebhakethi yentsimbi eguqukayo, ezinzile ngakumbi kwaye inokuthenjwa, unokuyifaka ngokulula into oyifunayo. Ngomgangatho we-IP66, ukukhanya kwe-zeta yethu ekhokelelweyo kungasetyenziswa ngokubanzi kwiiprojekthi zangaphandle kunye nezangaphakathi zokukhanyisa. Oku kukhokelele ukukhanya kwezikhukula 6000k ilungele iigadi, iifektri, iidokodo, iiyadi, amabala, amabala emidlalo kunye nezinye iindawo apho ukukhanya kufunekayo.
Iikhathalo zomkhiqizo : Ukukhanya koMkhukula we-LED > 200w Ukukhanya koMkhukula
I-200W I-Flood Light Outdoor Light Fixtures Qhagamshelana Ngoku
I-bulbs yokuKhanyisa kwe-200W nge-plug ye-24000lm Qhagamshelana Ngoku
Ukukhanya koMkhukula kukhokelwe kuma-200 Watt 24000lm 5000k Qhagamshelana Ngoku
Ukukhanya kweNkundla yezikhukula Ukukhanya koMkhanyo we-200W 24000LM 5000K Qhagamshelana Ngoku
Ukukhokelwa koLungiso loKhanyiso loKhanyiso lwe-200W 24000LM Qhagamshelana Ngoku
Ukukhokelwa kweZibane eziKhanyayo ezingama-150w i-Bulbs engu-120V 5000K Qhagamshelana Ngoku
Ndikhokele ukukhanya kwe-150w Ukukhokelwa ziiBhuleki Ndikhokele Izibane ezingama-120v zoMkhukula Ndikhokele ukukhanya kwe-120w koMkhukula Ndikhokele ukukhanya kwe-30w koMkhukula Ndikhokele ukukhanya kwe-200w koMkhukula Ufo Ukhule Ukukhanya 150w Umbane okhanyiselwe ukukhanya kwe-100W